Hadal-haynta kubadda cagta ee maanta | Saxil News Network
Hadal-haynta kubadda cagta ee maanta
December 25, 2017 - Written by editor
Liverpool oo goolhaye cusub loogu yaboohay:
Wargeyska Metro ee ka soo baxa magaalada London ayaa qoray in kooxda Liverpool loogu yaboohay inay la soo wareegto bisha January goolhayaha Jarmalka u dhashay ee kooxda Paris Saint-Germain Kevin Trapp oo 27 sano jir ah.
Trapp wuxuu kooxda PSG ee ka ciyaarta horyaalka Faransiiska ee Ligue 1 uu u saftay 60 ciyaarood tan iyo markii uu ku biiray kooxdaasi sanadkii 2015, waxaase aad loogu xiriirin jiray in uu ka tagayo Parc des Princes sanadka dhalanaya todobaadka dambe.
Mauricio Pochettino oo dhiig cusub Tottenham u doonaya:
Tababaraha 45 jirka reer Argentine ee kooxda Tottenham Mauricio Pochettino ayaa isku diyaarinaya in kooxda ku biiriyo labada ciyaaryahan ee kala ah 24 jirka khadka dhexe uga ciyaara kooxda Everton Ross Barkley iyo 24 jirka daafaca uga ciyaara Manchester Unied Luke Shaw, sida ay qorayso jariirada Sunday Express.
Pochettino ayaa hadda arka in kooxdiisa Tottenham ay ka simbiririxatay afarta kooxdood ee ugu sarreeya Premier League waxaana uu hadda uu jeedaalinayaa in uu dhiig cusub ku soo daro kooxda iyadoo todobaadka dambe ay furmayso daaqada kala iibsiga ciyaartoyda.
Pochettino ayaa diyaar u ah in kula loollamo kooxda Chelsea in uu la soo wareego xiddiga reer England Barkley, kaasi oo ku soo laabanaya tababarka ka dib dhaawac muruqa ka soo gaaray.
Man United oo ka gaws adeygaysa heshiis cusub oo ay siiso Mourinho:
Wargeyska Mirror ee ka soo baxa London ayaa qoray in kooxda Manchester United ay dib u dhigtay inay siiso qandaraas cusub tababare Jose Mourinho, iyadoo kooxdu ay hadda si weyn uga hoos martay kooxda kale ee isku magaalada ka dhisan yihiin ee Manchester City tartanka loogu jiro hanashada horyaalka.
Shaki ayaa dul hogganaya in kooxda mar kale uu qaado hannaan ay ku soo ceshan karto kaalinteedii liibaax ee kubadda cagta ee Ingiriiska.
Tababare Jose Mourinho waxaa xaalad waji gabax ah uga tagay qaabka tababaraha reer Spain Pep Guardiola uu Manchester City uu ugu rogay koox tartanka horyaalka Premier League-ga u awood sheegata kooxaha kale ama in lagula loolamo koobka, isla markaana Mourinho aanu u hayn wax jawaab ah oo arinkaasi kaga horyimaado.
Taasi waxay sababtay maamulka sare ee Manchester United kuwooda saameynta ku leh aanay ku qanacsanayn qaab ciyaareedka tababaraha reer Portugal.
Arsenal oo ku horreysa la soo wareegida Leon Bailey:
Arsenal ayaa u muuqata inay ka horeysp Manchester United & Chelsea saxiixa 20-ka jirka aadka ay u doondoonayaan kooxaha waa weyn ee Yurub ee u ciyaara kooxda Bayer Leverkusen Leon Bailey ee garabka ka ciyaraa sida ay qortay jariirada Mirror ee London ka soo baxa.
Henrikh Mkhitaryan oo laga yaabo in uu ka tago Old Trafford.
Wargeyska Mail on Sunday wuxuu qoray in kooxda Inter Milan ay doonayso inay dhaafiso Garoonka Old Traford ee kooxda Shayaadiinta Cas cas ee Manchester 28-ka Henrikh Mkhitaryan, iyadoo ku qaadanaysa amaah